71029 စီးရီး 21 မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
21 / 09 / 2021 21 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 170 Views စာ0မှတ်ချက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, ၇၁၀၁၄ DFB - Mannschaft, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, 8909 Team GB, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ယူရို 2016, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, LEGO.com, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Muppets, ကမ္ဘာ့ဖလား
20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 131 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, DK စာအုပ်များ, ဟယ်လင် Murray, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Minifigures ကိုတွေ့ဆုံပါ, သေးသေးလေး
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 247 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Looney Tunes, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, looney သီချင်းများ, Marvel, မဲ Ashton, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Muppets
12 / 09 / 2021 12 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 315 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ
LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲအတည်ပြုခဲ့သည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 787 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, LEGO.com, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
နောက်ဆုံးပေါ် Collectible Minifigures စီးရီးများကိုကမ္ဘာအနှံ့ LEGO.com တွင်စာရင်းပြုပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုသည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 540 Views စာ0မှတ်ချက် 30392 Hermione ရဲ့လေ့လာမှု Desk, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Lego ရာသီအလိုက်, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
28 / 06 / 2021 28 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 565 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 76178 နေ့စဉ် Bugle, Boba fett, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Mark Stafford, Marvel, သေးသေးလေး, Spider-Man, Star Wars, Star Warsဖြေ, အဆိုပါ Mandalorian
LEGO ဒီဇိုင်းပညာရှင် Mark Stafford ကအသေးစားဓာတ်ပုံတွေဟာဘာကြောင့်များသောအားဖြင့်ပုံနှိပ်ထားတဲ့လက်များကိုမဝယ်ယူရတာလဲဆိုတာရှင်းပြထားပါတယ်
26 / 04 / 2021 26 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 699 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, bugs Bunny, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Daffy ဘဲ, Lego, Lego Vidiyo, LEGO.com, အမ်ဗင်artIan, သေးသေးလေး, ဝက်ဝက်, စျေးဝယ်, ကြောင် Sylvester, အဆိုပါ LEGO Group, Tweety, Vidiyo, အီးဝံပုလှေ Wile
LEGO Collectible Minifigures 2021 စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုအပေါ်နောက်ဆုံးစကားလုံး
12 / 04 / 2021 12 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 935 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, looney သီချင်းများ, သေးသေးလေး
LEGO 71030 Looney Tunes ၏အစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်များအရ Collectible Minifigures သည်ဈေးနှုန်းထပ်မံတက်နေ ဦး မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်